Maamulka Jubbaland oo Ka mamnuucay Talefishinka Universal Deegaanada Uu Ka ariyo Maamulkaas – STAR FM SOMALIA
Maamulka Jubbaland ayaa ka mamnuucay in ay shaqaalaha taleefishinka Universal ka shaqeeyaan deegaanada hoos yimaada maamulka Jubba.
Sababta xayiraada loo saaray Tv-ga Universal ayaa la sheegay in ay tahay qaabka ay u baahisay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo.
Maamulka Jubbaland ayaa ka xanaaqay sida loo dhigay warka ku saabsanaa qaraxa ismiidaaminta ah ee geystey qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo lala beegsaday ciidamo ku jirey tababar.
War ka soo baxay wasaarada Warfaafinta maamulka Jubba ayaa ku eedeeyay tv-ga Universal in muddo labo sano ah uu ka faafinayay warar been abuur ah maamulka Jubbaland.
Wasaarada Warfaafinta maamulka Jubba ayaa qoraalkiisa ugaga mamnuucay in shaqaale ka tirsan tv-ga Universal ka howlgalaan gobolada uu ka taliyo.Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka tv-ga Universal ee ku saabsan xaryiraada uu ku soo rogay maamulka Jubba.
Maamulada ka jira dalka ayaa cadaadis saaraya saxaafada waxana weli hawada ka maqan saddex idaacadood oo ku kala yaal magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusomareeb kadib markii maamulka Ahlu Sunna uu ku soo rogay xayiraad.